Dadaallada Beesha Caalamka oo sii socda | KEYDMEDIA ONLINE
Dadaallada Beesha Caalamka oo sii socda
Dadaaladda Wakiillada Beesha Caalamka ee jooga Soomaaliya ayaa wali halkoodii ka sii socda, waxaana mar kale Madaxda Soomaalida loogu baaqay in ay ku soo laabtaan teendhadii uu shirku ka socday.
MUQDISHO, Soomaaliya – War ka soo baxay Saaxiibada Beesha Caalamka ayaa lagu mujiiyay walaac xooggan oo la xariira war-saxaafadeedyadii mas’uuliyiinta qaarkood ay Arbacadii la wadaageen bulshada, ee ahaa in ay burbureen wadahadalla.
Qoraalka ka soo baxay Wakiillada Caalamka ee Xalane degen, ayaa lagu sheegay in wadahadalladu yihiin waddada kaliya ee lagu gari karo doorasho la isla oggol yahay oo dalka ka dhacda, waxayna ka digeen in dalka loo horseedo dib u dhac dhinacyo badan ah.
“Waxaan adkeynaynaa in wadahadalladan ay udub-dhexaad u yihiin xaqiijinta hirgelinta hannaanka doorasho ee 17kii Sebtember ee loogu talagalay doorashooyin lagu kalsoonaan karo, iyadoo la’aantood uu khatar gelayo horumarkii sanadihii ugu dambeeyay laga gaaray xasilloonida, horumarka dhaqaale iyo dib-u-hagaajinta hay'adaha ee Soomaaliya.” Ayaa lagu yiri war saxaafadeedka.
Madaxda Dowladda Fadaraalka, kuwa Maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha Gobalka Banaadir, oo si ula kac ah uga kala dareeray teendhada shirka Arbacadii, ayaa lagu booriyay in ay dib ugu laabtaan Xalane, billaabanna wadahadallada.
“Waxaan ku boorinaynaa madaxda inay si deg deg ah ugu laabtaan wadahadalada si ay heshiis uga gaaraan arrimaha harasan, iyagoo u maraya isu-tanaasul.” Ayaa lagu yiri warka kasoo baxay wakiillada.
Sidii caadiga ahayd, waxay mar kale ku celiyeen in aysan aqbali doonin “Geeddi-socod babar-socod ah, mid aan loo dhamayn, ama dadaallo cusub oo horseedaya kordhinta muddo xileedkii hore. Waxaan ku boorinaynaa dhamaan madaxda Soomaaliyeed inay aad isu xakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo hal dhinac ah, kaas oo sababi kara in xiisadaha siyaasadeed ay kasii daraan”.
Madaxda DFS iyo DGXF, ayaa isla fahmi la’ hannaanka Doorashiiyinka, waxaana dadaallada lagu doonayo xalka, seynta uga taagan Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday 8 Febaraayo 2021 Maxamed Cabdullaahi farmaajo.